စက်ရုပ်ကူညီသူများMehmetçiသို့လာပါ။ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီစက်ရုပ်ကူညီသူများMehmetçiသို့ရောက်နေပြီ!
10 / 05 / 2020 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, Kara-, ခေါင်းစီးသတင်း, ကာကွယ်ရေး, တူရကီ, VIDEOS
အလယ်တန်းအဆင့်ဒုတိယအဆင့်မောင်းသူမဲ့မြေယာစီမံကိန်းစီမံကိန်းစာချုပ်ကိုသမ္မတကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းဥက္ကid္ဌ (SSB) နှင့် ASELSAN တို့အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
သမ္မတကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းဥက္ကIndustry္ဌ။ ဒေါက်တာ mailsmail Demir:“ စက်ရုပ်အကူများMehmetçiကိုလာနေကြပြီ။ အလတ်နှင့်အလတ်စားပထမအဆင့်အဆင့်မောင်းသူမဲ့မြေပြင်ယာဉ်များ၏ရှေ့ပြေးပုံစံများအပြီး Aselsan နှင့်အလယ်တန်းအဆင့်ဒုတိယအဆင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ Katmerciler သည်ပလက်ဖောင်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည့်စီမံကိန်းနှင့်အတူလက်နက်ကိုင်မောင်းသူမဲ့မြေပြင်ယာဉ်များကို KKK သို့ပို့ဆောင်မည်။
စီမံကိန်း; ရှာဖွေရေး၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပစ်မှတ်ထောက်လှမ်းခြင်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်လက်နက်စနစ်များနှင့်အခြားစနစ်များလိုအပ်သည့်အလိုအလျောက်အသုံးပြုရန်၊ ဝေးလံခေါင်သီသောထိန်းချုပ်မှု၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနိုင်သည့်မောင်းသူမဲ့မြေပြင်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးနယ်မြေတွင်မောင်းသူမဲ့စနစ်များသည်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တိုးများလာနေသည်။ အထူးသဖြင့်အချိုးမညီစစ်ပွဲအခြေအနေများတွင်မြေပြင်၊ ပင်လယ်ပြင်သို့မဟုတ်လေထုထဲတွင်လည်ပတ်။ မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သောမောင်းသူမဲ့စနစ်များသည်ကင်းထောက်၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ ကာကွယ်ရေး၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အလားတူလျင်မြန်စွာနှင့်အကျိုးရှိစွာစသည့်လှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ မောင်းသူမဲ့စနစ်များကိုလက်နက်တပ်ဆင်ခြင်း၊ မောင်းသူမဲ့စနစ်များကိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ၄ င်းနယ်မြေတွင်အရေးပါသောအခြေခံအဆောက်အအုံများဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုစုဆောင်းရန်အယူအဆဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ASELSAN သည်လွန်ခဲ့သော ၁၄ နှစ်ကကျင်းပခဲ့သော IDEF 14 International Defense Fair တွင်၎င်း၏ပထမဆုံးမောင်းသူမဲ့မြေပြင်vehicleZCİနှင့်GEZGİNတို့ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ASELSAN သည်၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမောင်းသူမဲ့စနစ်များနှင့်ကောင်းမွန်ပြီးပြည်တွင်း / ပြည်ပပလက်ဖောင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်မိတ်ဖက်ပြုခဲ့သည်။
ASELSAN သည်နိုင်ငံပိုင်နှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာအလားတူထုတ်ကုန်များကိုမောင်းသူမဲ့စနစ်များအတွက် TSK ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များစာရင်းတွင် ASELSAN ထုတ်ကုန်သည်မောင်းသူမဲ့ဝေဟင်၊ ပင်လယ်နှင့်ကုန်းလမ်းယာဉ်များ (Bomb Destruction Robots) ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
TCDD ခြိမ်းခြောက်မှုစာချုပ်, အလုပ်ဝင်ပါလိမ့်မယ်သူတွေကိုတောင်းခံရ7တစ်နှစ်အလုပ်ကတိကဝတ်
လွမ်းဆွတ်ဓါတ်ရထား Bursa အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး
အစ္စတန်ဘူလ် (ဗီဒီယို) တွင်မြေအောက်သှားသောသူတို့အားငှားရမ်းရန်ပိုနှစ်သက်
fixed နိုင်ငံခြားရေးငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းကိုလစဉ်အကူးအပြောင်း 3-6 တံတား
တူရကီ - Elitbay ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းကုမ္ပဏီအလုပ်ကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်
Izmir အတွက်ဆိုင်ကယ်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်သွား5တထောင်ကလူ
Osmangazi အတွက် PTT ကလက်မှတ်တံတားကျမ်းပိုဒ်
Eskişehirလေ့ကျင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စ. စစ်သူရဲတို့အားပြသခံရဖို့ Start
အဆိုပါပါဝင်စစ်သား (ဗီဒီယို) အတွက်သံလွင်ဌာနခွဲစစ်ဆင်ရေး Dawn ဆုတောငျးခကျြမြားမှ Mota
ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Bulent Arinc နှင့်သူ၏ဇနီးMünevver Arinc က, နှင်းလျှောစီးဓာတ်လှေကားကိုခံစား
Başkent Ankara သည်ရာသီမရွေး '19 စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲကိုစီစဉ်သည်
Capital သည် Ankara ရာသီဥတု Off-Season'19 စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်